I-T Shirt Yokushicilela Umshini We-Digital China Manufacturer
Incazelo:Iphrinta ye-Dtg Digital,Hamba ngqo kuGqoka lePhrinti yephrinta,Umshini wokushicilela we-T-Ishicilelo
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-Digital > I-T Shirt Printer > I-T Shirt Yokushicilela Umshini We-Digital
Le Tshi Yokushicilela Umshini I-Digital iyinani eshibhile kanye nekhwalithi ephezulu, sinamathimba aqinile, siphenya futhi sithuthukise i- Dtg Digital Printer ngokwayo , singenza i-OEM design. Kulula kakhulu ukusebenza futhi ufunde. Sinikeza insizakalo eyodwa kokuyodwa emva kokudayiswa, eziningi onjiniyela endaweni yethu. Iphrinta yenziwa nge-aluminium ukuqinisekisa ukuthi umshini usebenza kahle futhi ulwa nomonakalo ngesikhathi sokubeletha. Ngebuchwepheshe obuphezulu, singaphrinta kwihembe, isikhwama, izicathulo, i-cap, sock, indwangu nemikhiqizo ehlobene . Ihlukana nokunciphisa umbala wenkinobho wendabuko, lo mkhakha uthola ukukhiqizwa kwemishini, ukunciphisa izindleko zabasebenzi, inqubo yokunyathelisa yezindleko eziphansi, ukukhiqizwa okuphezulu, ukulahla okuphansi, imikhiqizo ephezulu efinyeleleke ngempela! Hamba ngqo kuGqoka lePhrinti yephrinta
Isixazululo esiphezulu sama-5760 * 2880 * 2880 singakuvumela ukuthi uphrinte kunoma iyiphi impahla enomphumela omuhle. Iphrinta ye-Dtg Digital
Umshini wokushicilela we-T-Ishicilelo
Iphrinta ye-Dtg Digital Hamba ngqo kuGqoka lePhrinti yephrinta Umshini wokushicilela we-T-Ishicilelo Iphrinta ye-Digital Iphrinta ye-Wood Digital Iphrinta ye-Biscuit Digital Iphrinta ye-Candy Digital Iphrinta ye-Digital Bag